Rasaasa News – Nin Daad Qaaday Xunbo Cuskay
on April 15, 2009 11:14 pm
jwxo- shiilada ama kooxda khaatum-xun oo markale isku dayaysa in ay shacabka indhasaabto.
Haleeo waygodlatay maxay godlatay? Been aan sal iyo raad toona lahayn. Waxaan shacabka qaaliga ah ee reer ogadeniya u cadaynaynaa in kooxda siidabar go,aysa ee khaatumo-xun ee uu hogaamiyo dagaal oogaha ashahaado la dirika ah ee M. Cumar in ay ka bilaabeen xaafadaha in ay soo booqdaan oo ay dhaga dhageeyaan guryahay sida shaydaankii.iyaga oo arintan uga dan leh bal in ay shacabku fahmeen iyo in kale ficilada fooshaxun ee ay ka wadaan ogadeniya iyo jubooyinka.
Hadaba maxaytahay cajalada ay sheegtay haleelo beenaleey?
waa cajalad ay xog waran ku bixinayaan naftoodhurayaal ka mid ahaa dhalinyarada sida khaldan loo isticmaalay ee ku xaraysnayd Cali Buuleey ee laga dhigay ashahaado la dirirka iyaga oo lagu qasbay in dadka walaalahood ah ee hiil iyo hooba lagarabtaagan halganka in ay dambi ka galaan kana garab dagaalamaan Bare hiiraale. Ka dib markay cuqaashii iyo salaadiintii ku baraarugeen waata keentay in lagu amro in ay maalmo hubka ku dhigaan gobalkana ka baxaan.
Hadaba cajalada ay sheegtay haleelo beenaleey see lagu helay, cajalda ay hordheceen kooxda khaatumoxun waxaa guri ka xaday ninka lagu magacaabo Maxamed Cali oo ah ni bulshada qoraxay ku dhix koray kuna jira dagaal fool xun oo aan sababtiisa lagaranaynin. waana ninka hada ka hor haleelo wax ku soo qoray isagoo ku been abuu ranaya beel uu san ahayn, kuna gafay akhyaar badan oo aan waxba ka bi,inin.
Eedaysanoo waa lagu arkaa waana lagu ogyahay.